Itoobiya oo xirtay hogaamiye mucaarad ah oo caan ah - BBC Somali
1 Disembar 2016
Laamaha ammaanka ee dalka Itoobiya ayaa xiray hogaamiye mucaarad oo caan ah.
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay xirxirtay in kabadan kaw iyo toban kun oo ruux tan iyo intii uu bilawday xukunka dagdaga ah.
Bare sare Merera Gudina ayaa si dagdag ah loo xiray Arbacdii, ka dib markii uu ka soo laabtay magaalada Brussels.
Warbaahinta deegaanku waxaa kale oo ay sheegeen in la xirxiray qaar ka mid ah qaraabadiisa oo iyagana la socday.
Xukuumaddu ma aysan shaacinin sababta ay u xirtay, laakiin horay ayuu si wayn dawladda ugu dhaliilay xirxiritaanka boqolaalka ruux ee Oromada iyo Amxaarada ah, wuxuuna sheegay in xukunka dagdaga ah uusan daboolin mudaaharaadyadii dawladda lagu diidanaa ee soo socday wakhtiga sanadka ku dhaw.